Al Shabaab iyo Ciidamada Doowlada oo ku Dagaalay Beydhabo | Somaale.com
Al Shabaab iyo Ciidamada Doowlada oo ku Dagaalay Beydhabo
Iska horimaadkaani ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii Ciidamo ka tirsan Al Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo Ciidamada DKMG iyo kuwa Ethiopia ay ku leeyihiin Suuqa Badarka Xaafadda Isha ee Magaalada Baydhabo.
Ciidamada DKMG iyo kuwa Al Shabaab ayaa isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan, waxaana la sheegay in qasaaro uu soo kala gaaray dhinacyadaasi sida ay Idaacadda Shabelle u xaqiijiyeen dadka deegaanka ah.
Taliyaha Saldhigga ee Magaalada Baydhabo Aadan Axmed Cumar (Aadan Biit) oo la hadlay saxaafada ayaa waxa uu xaqiijiyay in weerarkaasi uu jiro islamarkaana ay kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan Kooxda Al Shabaab, hase ahaatee ay qasaaro xoogan gaarsiiyeen sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale wax war ah kama soo bixin Saraakiisha Ciidamada Al Shabaab ee horboodaysay dagaalkaasi, saakay Ciidamada DKMG iyo kuwa Ethiopia ay howlgallo ka wadaan Xaafadaha Magaaladaasi islamarkaana ay baadi goob ku hayaan dadka ka dambeeya weerarkaasi.
Magaalada Baydhabo ee Xarunta gobolka Bay ayaa waxa gacanta ku haya DKMG ah waxaana mararka qaar ka dhaca dagaalo iyo duqeymo u dhaxeeya Ciidamada DKMG iyo kuwa Al Shabaab maadaama gacan ku haynta Magaaladaasi ay isku hayaan dhinacyadaasi.
Degaan la duqeeyay iyo al-Shabab oo laga cawday 0
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo booqday Baarlamaanka Sweden (SAWIRRO)